Uru nke okwu ndị a na-ekwu okwu ma na-anwụ anwụ-maka wheel maka ọgba tum tum - Dongguan Yiwei Precision hardware Products Co. LTD
1. Reel coefficient, ezigbo agbanwe, na ezi mmetụta na-eguzogide. Ebe ọ bụ na a na-enweta mpempe akwụkwọ na-agbanwe agbanwe na nnukwu ngbanwe na wiil na-aga n'okporo ụzọ nyocha tangent, enwere ike ịmịpụta mmetụta dị n'èzí ma gbasasịa site na mpempe akwụkwọ na-agafe oge, na-eme ka ngwaahịa ngwaahịa ahụ Oge nke mmetụta na-ada mbà. Ugbo ala nile ama ama n’uwa n’egwuregwu ọgba tum tum na-eji reels. Ugba ịnyịnya ígwè obodo niile na-ejikwa reel. Cheedị banyere ahụ erughị ala ị na-agba ịnyịnya ígwè na-agba n'okporo ụzọ.
2. Igwe waya na-adị nfe dị arọ, ikuku na-eguzogide ikuku dị obere mgbe ọ na-atụgharị. Ojiji nke wiil waya maka obere ụgbọala nwere ike inyere ụmụ akwụkwọ aka imeziwanye ọrụ ha / nha nha, ntughari nke mbido-na-ibu, na osooso na ịrụ ọrụ nke ụgbọala ahụ na-akawanye mma. N'ihe banyere asọmpi, ha pere mpe karịa ndị otu ụdị ahụ.
3. /zụ / ndozi / nnọchi ego nke waya waya nchara dị ala karịa nke otu ụdị ahụ, na ngwa ndị ahụ dị ogologo. Ọ bụrụ na emebi, ngwaahịa dị mma nwere ike ịchọta na mpaghara ndị dịpụrụ adịpụ.
Die mgbatị wiil, akpọkarị plate efere na ogidi, nwere ha isi uru:
1. Igwe na-acha efere nwere ezigbo nguzosi ike na nnyefe ọsọ ọsọ. N'ihi mmebi nke ukwu, nke torque nnyefe na-akwụsị n'azụ diski wheel, na-na-na-na-adịghị adabara nnukwu-na-agba ọsọ ọduọ ụgbọala na nnukwu ozugbo iyi, n'ihi ya, ọ bụ obere maka a ụgbọ ala na-enweghị a diski wheel. Igwe nkpuchi a na-egweri diski nwere ike iguzogide nnukwu ibu, ma ọ bụrụ na mmetụta ahụ buru oke ibu, ọ ga-eme ka nrụrụ a na-apụghị ịgbagha agbagha ma ọ bụ mgbawa (ụfọdụ n'ime ha dị nnọọ aghụghọ ma sie ike ịchọpụta). Ndị na-achọ iji skuuta dị ka ụgbọ ala-ụzọ kwesịrị ị roada ntị.
2. Ihe eccentricity nke wheel flat bụ n'ozuzu ya karịa nke otu ọkwa. Ọ bụrụhaala na nkenke nke ebu ahụ dị elu, enwere ike ijikwa eccentricity nke wheel efere dị oke ala, na wheel linear ga-atụle ihe ndị dị ka njehie ogologo. Ya mere, mgbe ọsọ ụkwụ ụkwụ dị elu, wiilị efere na-adịtụ jụụ na ịma jijiji nke etiti ike ndọda kpatara obere, nke bakwara uru ụgbọ ala dị elu. nkwụsi ike.
3. Ọ bụrụ na wiilị efere adịghị n'okpuru nnukwu mmetụta ozugbo, ọ na-adịkarị ogologo karịa karịa waya waya nchara, ọ na-abụkwa nchara nchara na nchara na-eguzogide karịa igwe waya waya.